20 lula origami yezandla | Imisebenzi yezandla ivuliwe
20 lula origami yezandla
Elizabeth Catalan | | Imisebenzi yezandla zekhadibhodi, Ubuciko bephepha
Isithombe| umxhasi nge-Pixabay
La i-origami ubuciko bokudala izibalo zephepha ngaphandle kweglue futhi ngaphandle kokusikeka. Iphinde ibe nezinzuzo eziningi. Akukhona nje kuphela ukuthi kuwukuzilibazisa okujabulisa kakhulu, kodwa futhi kushukumisa ukusebenzelana kwezandla namehlo, kukhuthaze ukusungula izinto nokuzivocavoca ingqondo.
Uma uthanda umbono wokuqeqesha amakhono akho kule timu futhi uqale ngamamodeli alula, lezi zibalo eziyi-15 ze-origami zizokujabulisa. Zilula kangangokuthi ngisho nezingane ziyakwazi ukuzenza. Ungaphuthelwa!
3 ubuso bempungushe
4 ubuso bengulube
6 ubuso be-koala
7 Ubuso boRabi
10 Amabhukumaka ephepha ahlekisayo
11 imali ye-origami
12 Ama-mobiles wephepha lezingane
13 Isikebhe samaphepha
14 Izinhliziyo zephepha
15 iphepha rose
16 izinkanyezi ze-ninja zephepha
17 isibungu sephepha
18 ihhashi lephepha
20 idada lephepha
I-classic ye-origami ukwenza inja ibhekane. Kuwumsebenzi wezandla olula izingane kanye nabantu abadala abangangena ngawo kulesi siqondiso. Izinto ozozidinga zimbalwa kakhulu: iphepha nomaka.
Eposini Ubuso obulula be-Origami Dog ungathola izinyathelo zokudala lo msebenzi omncane ngokushesha.
Ikati ingenye yezilwane ongazimelela nge-origami. Njengobuso benja, akuwona umsebenzi onzima kakhulu, ngakho-ke ungaqala ukwenza lesi siyalo nge Ubuso bekati. Khetha iphepha elithile nomaka futhi uzoba nakho ngokushesha ezandleni zakho. Ungabona ukuthi kwenziwa kanjani kokuthunyelwe Ubuso bekati.
La ubuso bempungushe Ngenye yemiklamo ye-origami ezoba lula kuwe ukuthi uyenze. Ifana ncamashi neyenja, ngakho-ke uma ube muhle kuleya, lena ngeke ibe ngaphansi. Izinto ozozidinga amakaki nephepha.
Eposini Ubuso be-Origami fox uzothola inguqulo elula yalesi silwane kodwa ungakwazi ukwenza ngokwezifiso ngokufaka umbala ngendlela othanda ngayo.
El ingulube iphinde imelwe ku-origami futhi ingenye yezilwane ezilula kakhulu ukuzenza. qaphela okuthunyelwe ubuso bengulube ye-origami kulula ngoba ngokuqinisekile uzofuna ukuyengeza eqoqweni lakho lezidalwa ze-origami. Njengakuzo zonke ezinye izibalo, iphepha nomaki kuzoba abalingani bakho abakhulu.
I-Los izindlovu Zingaphinde zimelelwe nge-origami. Futhi hhayi ngomsebenzi wezandla onzima kakhulu, kodwa okuphambene kakhulu. Ngephepha elincane, maduze uzokwazi ukwenza ubuso balesi silwane. Ngesiqu sakhe nakho konke! eposini Ubuso beNdlovu ye-Origami ungafunda indlela yokwenza isinyathelo ngesinyathelo.
El i-koala iphinde imelwe kulolu hlu lwezibalo ze-origami. Njengezinye izibalo, lena nayo ilula kakhulu futhi ngokushesha nje lapho usunomfanekiso owenziwe ngephepha nomaka, ungawufaka umbala ukuze uwenze ube ngokoqobo kancane. bheka okuthunyelwe Ubuso obulula be-Origami Koala ukubona ukuthi kwenziwa kanjani.
Londoloza elinye iphepha osalisele ngokwenza i-origami ukuze udale lokhu kumnandi ubuso bukanogwaja lokho kuletha ezindlebeni. Njengazo zonke ezinye izibalo ozibonile kuze kube manje, unogwaja nawo ulula kakhulu. Uma ufuna ukuzama lo msebenzi wezandla, thatha umaka, iphepha bese ubheka imiyalo ozoyithola kokuthunyelwe. Ubuso Bomvundla we-Origami.
Uma kuziwa ekumeleleni izilwane nge-origami, umzimba ogcwele uphelele ukuqala ukuzijwayeza. Kuyindaba yalokhu umkhomo. Iqhinga lokudala lesi sidalwa lisemsileni waso, nakuba ngosizo lwesifundo ozosibona kokuthunyelwe I-Easy Origami Whale ngeke kube khona ukugoqa okuyomelana nawe. Vele uthathe iphepha nepeni lomaka bese… uphume!
Ingabe ufuna ukuzama ukwenza esinye isilwane esigcwele umzimba nge-origami? Naka le penguin enelukuluku! eposini I-origami penguin elula Unesifundo sevidiyo esinazo zonke izinyathelo nemiyalelo ukuze ungaphuthelwa lutho.
Amabhukumaka ephepha ahlekisayo
Omunye ubuciko be-origami obujabulisa kakhulu futhi obuwusizo ongayenza i ibhukhimakhi yephepha lokho kukusiza ukuthi wazi ukuthi kungani ingxenye yencwadi ihlale ekufundeni kwakho ngaphandle kokumosha amakhasi encwadi. Futhi kungenye ye-origami elula izingane ezingasebenzisa ngayo amakhono azo kulo msebenzi wezandla.
Ngemiyalelo ozoyithola kokuthunyelwe Amabhukumaka ephepha ahlekisayo kuzoba lula kakhulu.
Uma kufanele unikeze isipho, ngezinye izikhathi ukunikeza imali kuyinto elula kakhulu njengoba akudingeki uphazamise ingqondo yakho kakhulu ukuze unikeze okuthile. Kodwa-ke, kungase kube okubandayo futhi kungabi nabuntu kwabanye abantu. Ngakho-ke, uma uhlela ukunikeza imali njengesipho futhi ufuna ukumangaza umamukeli ngendlela yokuqala, ungayinikeza ngendlela ye-origami.
Eposini Nikeza imali ngendlela yokuqala, usebenzisa inqubo ye-origami ungafunda ukwenza umuhle uvemvane onethikithi kanye nendlela ye-origami.
Ama-mobiles wephepha lezingane
Enye yezandla ongayenza nge-origami i iphepha mobile for kids, isakhiwo esakhiwe ngezilengalenga ezihamba emoyeni. Izingane ziyakuthanda ukubuka lawa maselula amahle nanemibala ephuma kumacansi azo.
Eposini Ama-mobiles wephepha lezingane Ungafunda ukwenza lo msebenzi wezandla ngezinto ezivame ukutholakala ekhaya njengentambo noma uboya obucolekileyo, isikele, amakhadibhodi anombala nezinduku zepulasitiki.
Enye yezinto zakudala ze-origami yile isikebhe sephepha. Eqinisweni, uke wenza eyodwa ukuze uzijabulise isikhashana. Ngaphezu kwalokho, uma usuqedile kumnandi kakhulu ukuyibeka ukuze uhambe emfudlaneni noma emthonjeni. Ingenye ye-origami elula ukuyenza, ngakho-ke kuthatha imizuzu embalwa kuphela.
Uzothola lo msebenzi wezandla kuwebhu Indlela yokwenza i-origami. Uzodinga kuphela ishidi elingunxande elivela ebhukwini noma incwadi yokubhalela, nakuba ulifuna libe namandla kakhulu ungasebenzisa amakhadibhodi noma amakhadibhodi.
Isithombe| U-Michał Kosmulski nge-Flickr
Enye yezibalo ongayenza nge-origami izinhliziyo. Zibukeka zihle kakhulu ukuhlobisa izipho, amafolda noma izincwadi zokubhalela futhi kumnandi kakhulu ukwenza. Ngakho ungangabazi, uyoba kuningi fun ukuzilungiselela.
Yini ozoyidinga ukuze wenze lezi zibe zinhle izinhliziyo zamaphepha? Ikakhulukazi iphepha elinombala obomvu kanye nekhadibhodi. Kuwebhu Indlela yokwenza i-origami ungabona okokufundisa.
Isithombe| Gilad Aharoni
Omunye wemisebenzi yezandla emihle kakhulu ongayenza nge-origami yile iphepha roses. Uma uqala emhlabeni we-origami, ungase wesabe ukuthi kunzima kakhulu, kodwa akunjalo. Kufanele uzame ngoba kulula ukudala futhi umphumela muhle. Imininingwane enhle kakhulu ongayinikeza ngoSuku Lomama noma uSuku lweValentine.
Ungabona ukuthi kwenziwa kanjani kokuthunyelwe kwe-Paper Rose kuwebhu Indlela yokwenza i-origami. Uzodinga iphepha elibomvu noma amakhadibhodi amacembe kanye nohlaza uma ufuna ukuhambisana nawo ngesiqu.
izinkanyezi ze-ninja zephepha
Isithombe| indlela yokwenza i-origami
Omunye wemisebenzi yezandla ongayenza nge-origami yile izinkanyezi ze-ninja noma i-shuriken, njengethoyizi noma njengesesekeli semvunulo ye-ninja warrior. Ngamashidi ambalwa nje ephepha elinemibala ehlukene ungenza izinkanyezi ze-ninja ezimangalisayo. Naphezu kokuma kwayo, ayinalo izinga eliphezulu lobunzima futhi ungayenza nge-jiffy. Ungayibona kokuthunyelwe Inkanyezi ye-ninja yephepha kuwebhu Indlela yokwenza i-origami.
Isithombe| I-Origami elula
Ngephepha elincane futhi ngaphandle kwesidingo sokusebenzisa noma yimaphi amathuluzi ngaphandle kwezandla zakho, ungenza lokhu kube kuhle isibungu sephepha. Izibungu ziyizibungu ezigcina ziphenduke zibe ezinye izidalwa njengezimvemvane. Ngakho indlela enhle yokuchazela izingane ukuthi lezi zilwane zishintsha kanjani isimo ukwenza i-origami kuqala ibe isibungu bese kuba uvemvane. Ungabona ukuthi yenziwa kanjani kuwebhusayithi ye-Easy Origami.
Omunye wemisebenzi yezandla ebanda kunazo zonke ongayenza ephepheni ngenqubo ye-origami yile nhloko yehhashi. Kulula kakhulu futhi uma usuvele wenze imisebenzi yezandla embalwa edlule, lena ngeke ibe yimfihlakalo.
Yiziphi izinto ozozidinga ukwenza lokhu? ihhashi lephepha? Eyinhloko i-cardstock ethile ensundu nakuba ungasebenzisa futhi okumhlophe, okumpunga noma okumnyama. Uzodinga futhi umaka ukuze udwebe ubuso behhashi. Ungabona ukuthi kwenziwa kanjani kuwebhusayithi ye-Easy Origami.
Iphepha elilodwa nje lizokwanela ukwenza le nkawu enhle nge-origami, yebo, uzoyidinga ukuze ibe nombala ohlukile wobuso ngamunye. Kulula kakhulu ukwenza futhi ngeke kukuthathe ngaphezu kwemizuzu emi-2. Uyafuna ukubona ukuthi kwenziwa kanjani? Kuwebhusayithi ye-Easy Origami unesifundo esihle sevidiyo.
El idada lephepha esinye isibonelo esilula kakhulu se-origami sabaqalayo. Kuzokuthatha nje imizuzu embalwa ukuthola ubuso bedada, ozodinga ikhadibhodi elimhlophe neliphuzi ukumela izimpaphe noqhwaku lwale nyoni. Ngokuya ngosayizi wekhadibhodi, lokhu kuzoba idada. Ungabona okokufundisa kwevidiyo kokuthi ungakwenza kanjani kuwebhusayithi ye-Easy Origami.
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Ubuciko nezinto zokwakha » Imisebenzi yezandla zekhadibhodi » 20 lula origami yezandla
Imibono yesipho yoSuku Lobaba
Umgqomo owodwa onephepha lasendlini yangasese